सोसल मिडियाले न्यूजिल्याण्ड गोलिकाण्डको भिडियो हटाउन सक्लान् ? - Technology Khabar
» प्रविधि » सोसल मिडियाले न्यूजिल्याण्ड गोलिकाण्डको भिडियो हटाउन सक्लान् ?
सोसल मिडियाले न्यूजिल्याण्ड गोलिकाण्डको भिडियो हटाउन सक्लान् ?
Technology Khabar १ चैत्र २०७५, शुक्रबार
काठमाडौं । न्यूजिल्याण्डमा हालै ४० जना भन्दा बढिको ज्यानै जाने गरि भएको आक्रमणको भिडियो अहिले टेक कम्पनीहरुको लागि टाउको दुखाई भएको छ ।
फेसबुक, यूट्यूब र ट्वीटर तीन वटै कम्पनीहरुलाई सो आक्रमणको भिडियो कसरी हटाउने भन्ने चिन्ता शुरु भएको छ ।
न्यूजिल्याण्डको एक मस्जिदमा भएको गोलि काण्डको लाइभ भिडियो स्ट्रिमिंग आक्रमणकारीले आफ्नो फेसबुक पेजबाट गरेको थियो भने सो भिडियो अन्य साइटहरुमा पनि भाइरल भएको थियो ।
निकै क्रुर रहेको सो भिडियो फैलनबाट रोक्नका लागि फेसबुक, यूट्यूब र ट्विटर लागि परेका छन् ।
आक्रमणकारीमध्ये एकले लाइभस्ट्रीम गरेको थियो जसमा आक्रमणकारी मस्जिदमा गाएर मानिसहरुलाई गोलि हान्दै गरेको देखिन्छ ।
सो भिडियो बारेमा न्यूजिल्याण्डको प्रहरीले फेसबुकलाई जानकारी गराउने बित्तिकै सो व्यक्तिको फेसबुक र इन्स्टाग्राम एकाउन्ट हटाईएको थियो । त्यस्तै सो भिडियो पनि हटाईएको थियो ।
तर पनि घटना भएको घण्टौंपछि पनि सो भिडियो विभिन्न प्लेटफर्ममा शेयर भएपनि टेक कम्पनीहरुले त्यसलाई हटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरुले हिंसात्मक कन्टेन्टअन्तरगत त्यस्ता भिडियोहरु हटाउने गरेको बताएका छन् ।
न्यूजिल्याण्डको प्रहरीले पनि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुलाई सो हिंसात्मक भिडियो शेयर नगर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्ता किसिमका हिंसात्मक तथा दूव्र्यवहार गरिएका भिडियो तथा कन्टेन्टहरुलाई टेक मिडियाहरुले हटाउँदै आएको दाबी गरेपनि त्यस्ता सयौं भिडियोहरु सोसल मिडिया प्लेटफर्महरुमा भेटिने गरेका छन् । जसले गर्दा सामाजिक संजालहरुलाई गलत कन्टेन्टहरु रोक्न नसकेको पटक पटक आरोप लाग्दै आएको छ ।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका भिडियोहरु लाइभ स्ट्रीम हुने गरेको र त्यसलाई रोक्न नसकेको आरोप आएको थियो । त्यसैले अहिलेको यो भिडियो पनि के सामाजिक संजालबाट पूर्णरुपमा हट्ला त भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । एजेन्सी
प्रकाशित: १ चैत्र २०७५, शुक्रबार
सिसी टीभी जडान गर्न तीन करोड सहयोग
क्यान महासंघ निर्वाचनमा निर्विरोध उम्मेद्वारमध्ये कुँवर पक्षको पल्ला भारी, यी हुन् निर्विरोध सदस्यहरु
४ मंसिर २०७६, बुधबार
चीनका डाटा सेन्टरहरुमा स्वच्छ उर्जाको प्रयोग नगन्य, २ करोड १० लाख कारको बराबर कार्बन उत्पन्न
सहकारीलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्ने सरोकारबालाको भनाई
२८ जेष्ठ २०७५, सोमबार
श्रृंखलाबद्ध बम बिस्फोटपछि श्रीलंकामा सामाजिक संजाल बन्द
एलजीको सर्भिस रोबोट सिओलको रेष्टुरेन्टमा प्रयोग, ग्राहकलाई खाना दिने र संगीत सुनाउने